FAQs - Sichuan Rongteng Automation Equipment Co., Ltd.
Qaboojinta Gaaska Dabiiciga ah
Uumi-baxa Crystallization Skid
Skid daawaynta gaaska dabada
Unugga Soo kabashada NGL
Warshada Liquefaction LNG
Unugga Wax-soo-saarka Hydrogen
Qalabka Korontada Gaaska
Ku saabsan Kooxda
SU'AALAHA INTA BADAN LA ISWAYDIIYO
1. Waa maxay macluumaadka ay tahay in lagu bixiyo dawaynta gaaska dabiiciga ah ee skid?
1. Halabuurka gaaska oo faahfaahsan: mol %
2. Socodka: Nm3/d
3. Cadaadiska gudaha: Psi ama MPa
4. Heerkulka gudaha: °C
5. Goobta iyo xaaladaha cimilada, sida xaaladaha saadaasha hawada (inta badan heerkulka deegaanka, haddii ay u dhowdahay badda), korantada korontada, haddii ay jirto hawada qalabka, biyaha qaboojinta (sida waafaqsan baahida habka dhabta ah),
6. Nakhshadeynta iyo soo saarista koodka iyo heerarka.
2. Intee in le'eg ayay tahay wareegga wax-soo-saarku?
Waxay kuxirantahay badeecado kala duwan, sida caadiga ah 2 ilaa 4 bilood.
3. Maxaa adeegyo ah oo aad bixin kartaa?
Ma soo saari karno oo keliya dhammaan noocyada qalabka sida ku cad sawiradaada, laakiin sidoo kale waxaan ku siin karnaa xal faahfaahsan iyadoo loo eegayo shuruudahaaga gaarka ah.
4. Sidee ku saabsan adeegga iibka kadib?
Waxaan bixinaa qalabyada iyo buug-gacmeedka hawlgalka, waxaanan ku hageynaa macaamiisha inay ku rakibaan oo ku rakibaan goobta.Haddii ay jiraan wax dhibaato ah oo ku saabsan habka isticmaalka, waxaan ku siin doonaa hagitaan video oo la macaamili doonaa marka loo baahdo.
5. Waa maxay kala duwanaanta alaabtaadu?
Waxaan ku takhasusay naqshadeynta, R&D, wax soo saarka, rakibaadda, iyo adeegga hawlgalka ee noocyada kala duwan ee saliidda iyo gaaska garoonka ceelka daawaynta, nadiifinta gaaska dabiiciga ah, daawaynta saliid cayriin, soo kabashada hydrocarbon iftiin iyo liquefaction gaaska dabiiciga ah qalab dhamaystiran, dab-dhaliye gaaska dabiiciga ah .
Alaabta ugu muhiimsan waa:
Qalabka daaweynta madax-xanuunka
Qalabka qaboojinta gaaska dabiiciga ah
Unugga soo kabashada hydrocarbon khafiif ah
Qalabka daaweynta saliidda ceyriinka
Matoor gaaska dabiiciga ah
No. 8, Qaybta 2 ee Wadada Tengfei, Xaafada Shigao, Aagga Cusub ee Tianfu, Magaalada Meishan, Sichuan Shiinaha 620564
Tilmaamaha farsamada ee nidaamka pretreatment gaaska Quudinta iyo nidaamka Liquefaction iyo qaboojinta ee geeddi-socodka warshadda LNG
Dabacsanaanta ku shaqaynta aaladda LNG